DEG DEG DAAWO: Putland oo Fariin u dirtay Muuse Biixi iyo dagaal culus oo la iclaamiyay - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
DEG DEG DAAWO: Putland oo Fariin u dirtay Muuse Biixi iyo dagaal culus oo la iclaamiyay
Jun 4, 2019 - Comments off
Kusimaha Madaxweynaha waxaa kala qayb galay salaadda ciidda masuuliyiin ka tirsan Goleyaasha Puntland, isumo, cuqaal, nabadoo, waxgarad iyo shacab weynaha caasimadda.
Sidoo kale Kusimaha Madaxweynuhu wuxuu shacabka Puntland ugu baaqay inay ka qayb qaataan dedaalka dib looga dhisayo wadada halbowlaha ah ee isku xirtaa dalka oo dhan,taasoo ku bur-burtay roobabkii da’ay.
“Maanta Soomaaliya oo dhan waa kala xidhantahay wadooyinka go’ay Awgood, waxaan ku dedaalaynaa inaanu si deg deg ah wax uga qabano, waxaan shacabkana ka codsanayaa inay kaalintoodii saliimka ahayd ka qaataan”. Ayuu yiri Madaxweyne Karaash.
“Dhulkeenii waa lagu soo duulay, Sanaag baa u dambaysey waataa lasoo galay, iyagoo halkaa jooga ayuu Muusa Biixi leeyahay nabadgelyaan rabnaa, intuu ku jiro dalkeena “WAA LA TAHAY” baan leeyahay, ma dhacayso nabadi, mana suurtoobayso, waxaan leenahay xuduuddaadii tag hadaa nabaddoonayso, nabad waa rabnaa, weligayona waa ka shaqaynayney” Ayuu yiri Madaxweyne Ku-xigeenka dowladda Puntland.